जरिवाना तिरेपछि सवारी लाइसेन्स नभए पनि छुट
माघ ०८, २०७४ BNNTV
तनहुँ , सवारी सञ्चालन अनुमतिपत्र लाइसेन्स नभए पनि तनहुँमा सवारी साधन चलाउन पाइन्छ भन्दा अचम्म लाग्छ । तर, यो यथार्थ हो । लाइसेन्स नभए पनि सवारी साधन चलाएकै आधारमा ट्राफिक प्रहरीले पक्रिए पनि सामान्य जरिवाना तिरेपछि छुटकारा पाइन्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय रुटमा चल्ने सवारी चालक लाइसेन्सविनै बर्षौदेखि सवारी साधन चलाइरहेका छन् । उनीहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच नगर्ने भन्ने पनि होइन ।
उनीहरुलाई ट्राफिकले जरिवानावापतको सामान्य चिट काटेपछि पुनः सवारी चलाउन योग्य हुन्छन् । ग्रामीण भेगमा मात्र होइन, राजमार्गमा चल्ने केही सवारी चालक पनि यसरी नै सवारी चलाइरहेका छन् ।
दुर्घटना न्यूनिकरण र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न भन्दै ट्राफिक प्रहरीले राजमार्ग र ग्रामीण भेगमा समेत चेकजाँधचमा कडाइ गरेको छ । जसबाट सरकारलाई राजश्व त बढेको छ, तर दुर्घटनामा भने न्यूनिकरण भएको छैन् ।
प्रकाशित : सोमबार, माघ ०८, २०७४०८:१३
श्रीमतीसँग डिभोर्स गरेका मनोज गजुरेल जोगी बन्ने !
उचित जिम्मेवारी नपाएकाे भन्दै गच्छदारले दिए ‘कांग्रेस छाड्ने’ धम्की !
कसले बनाउँछ नक्कली भिसा ? नक्कली भिसा सहित नेपाल छिर्न थाले विदेशी !
कार्यक्षमता देखाउन नसक्ने मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारीमा प्रम ओली !
यी आमाको यस्तो लज्जाबोध गराउने हर्कत ! डेटिङमा समस्या आएको भन्दै बेचिन् आफ्नै छोरी !
परिवार नियोजनका अस्थायी साधन : जति धेरै जानकारी, उति कम प्रयोग
प्रहरीको शंकाको सुई घुम्यो गाउँलेतिर, चारजनाको डिएनए रिपोर्ट आयो